Maraykanka oo sheegay in ninkii fulinlahaa weerarkii Al-qaacida ee diyaaradii ku socotay Maraykan uu basaas u ahaa sirdoon kale – Radio Daljir
Maajo 9, 2012 12:00 b 0
Washington, May 09 – Warbixinada laga helayo Maraykanka ayaa sheegaya in ninkii la doonayey in uu isku miidaamiyo diyaarad laga lahaa Maraykanka uu u shaqaynayey Saudi Arabia.
Saraakiisha Maraykanka ayaa sheegaya in ninkaasi ay Al-qaacidada Jaziiradda Carbeed ee dalka Yemen dooneysay in uu diyaaradda isku qarxiyo uu ahaa nin hore loogu diray dalkaasi Yemen si uu u dhexgalo ama ugu dhex milmo Al-qaacida , isagoo u shaqaynayey sirdoonka dalka Saudi Arabia .
Ninkaasi basaaska ah ee u shaqaynayey sirdoonka Saudi Arabia ayaa ka tegay dalkaYemen ,isagoo waxyaalaha qarxa ee uu watay ku wareejiyey CIA ?da Maraykanka.
Sirdoonka Saudi Arabia ayaa qortay ninkaasi ay Al-qaacidda dooneysay in uu isku qarxiyo diyaaradda maraykankam, waxana sida la soo weriyey la sheegay in Saudi Arabia ay ninkaasi qoratay si uu ugu qanciyo ururkaasi Alqaacida in uu uu qarxiyo diyaarad ku socotay Maraykanka ,laakiin markii Al-qaacidda ay arrintaasi ogolaatay ayuu waxyaaliha qarxa ee lagu wareejiyey u gudbiyey CIA-da Maraykanka sida ay sheegeen saraakiisha Saudi Arabia.
Wargeyska New York Times ayaa ku waramay in ninkii basaaska ku ahaa boqortooyadda Saudia Arabia uu immika ku suganyahay goob ammaan ah oo ku taalla dalkaasi Saudi Arabia.
Isla xilligan Pentagon-ka Maraykanka ayaa sheegaya in ay tababarayaal u dirayaan dalkaasi Yemen, si ay dowladda Yemen uga caawiyaan la dagaalanka ururka Alqaacidada Jaziirada Carbeed oo halkaasi ku xoogan.
Maraykanka ayaa hore gacan weyn oo military u siin jiray dowladda Yemen ,waxana arrintaasi ay qayb ka ahayd barnaamijka la dagaalanka argagaxisadda.
Dhinaca kale maraykanka ayaa xoojinaya ugaadhsiga kooxaha mintidka ah ee Al-qaacidda ee ku sugan gudaha Yemen,waxana diyaaradaha bilaa duuliyaha ee Maraykanku wadaan weeraro ay ku dilayaan xubnaha muhiimka ah ee Al-qaacidada jaziiradda Carbeed ee dalka yemen.
Hogaamiye ka tirsanaa ururka Al-qaacidda ee dalka Yemen oo lagu xidhiidhiyey weerarkii sanadkii 2000 ee qaraxii lala bartilmaameedasaday markabkii dagaalka ee Maraykanka ee USS Cole ayaa dhowaan diyaaradaha bilaa duuliyaha ah ee Maraykanka ee drones-ku ku dileen dalkaasi Yemen .
Qaraxyo ruxay caasimadda Suuriya ee Dimishiq
Baahin: Salaasa, May 08, Maxamed C. Kuuriya ~ Daljir ~ Bossaso. Shir ku saabsan qorshaha amniga ee Somaliya oo ka furmay Muqdisho; R/wasaare Gaas ayaan ka waraysanay; Ciidanka amniga ee dawlada federaalka oo ku qabtay Ex-kontrool Afgooye nin xambaarsan walxaha qarxa; Warbixin ku saabsan qunbulad gacmeed lagu tuuray goob aflaamta lagu daawado Boocame, Sool.